Amathiphu Wokubanda Ophaya Namaphayi | Ukupheka Kwekhishi
Amathiphu wokuqandisa ophaya namaphayi
USusana godoy | | Ukudla kwendabuko, Ukupheka Okulula
Uma ungomunye wabantu abathanda i- i-pastry kepha abanasikhathi esiningi, lokhu kuzokuthakazelisa. Kwesinye isikhathi siya ekhishini bese sifuna ukutshala leso sikhathi ngendlela ephelele. Ungayithola kanjani? kumisa okweqanda lelo dessert esingeke silidle ngosuku olufanayo noma mhlawumbe olulandelayo. Vele, lapha singaba nokungabaza okuthile ukuthi namuhla, sizokucacisa ngendlela elula.
1 Ungaliqandisa ikhekhe?
1.1 Ungakwazi ukumisa uqweqwe lukakhilimu?
1.2 Ungakwazi ukumisa ikhekhe le-fondant?
1.3 Ungalibamba kanjani ikhekhe likhekhe
1.4 Friza iphayi le-apula
1.5 Ungafriza ikhekhe ezintathu zikashokoleti
1.6 Ngabe amaqebelengwane e-puff pastry angafriziwa?
2 Amakhekhe okupheka angabanda
3 Ungakwazi ukumisa iphayi eyenziwe?
3.1 Friza ubhaka obhakiwe
3.2 Friza ikhekhe lepheki
3.3 Friza ama-patties enziwe ekhaya
3.4 Ngabe i-tuna patty ingaqandeka?
Impendulo ejwayelekile ku- uma ungafriza ikhekhe nguyebo lowo. Ngaphandle kwalokho, kuzofanele sibone ukuthi sizobathola kanjani ezitolo ezinkulu eziningi. Vele, okufanele sikugcine engqondweni ukuthi kungcono ukuzigcina ngendlela eyiyo ukuze zingabambi noma yiluphi uhlobo lwephunga noma amanzi angene kuzo. Lokhu kuqinisekisa umphumela omuhle lapho uwaxosha.
Ungakwazi ukumisa uqweqwe lukakhilimu?
Futhi impendulo ivumile, yize lapha singathola okunye ukungalungi. Kunezikhathi eziningi lapho ngibe neqhwa elilodwa I-Cream Tart Kepha uma uyichitha, ivame ukwembuleka kancane. Isizathu siyini? Kuvame ukuthola umswakama omningi. Yingakho kunconywa ukuthenga ukhilimu onamafutha angama-35%, uma sizowushaya ekhaya. Lokhu kuzokwenza kuhambisane ngokwengeziwe. Yize uma unokungabaza, kungcono ukuwathenga ezitolo zokupheka, ngoba baningi abathengisa ukhilimu ofriziwe.
Ungakwazi ukumisa ikhekhe le-fondant?
Siyakwazi lokho amakhekhe amahle banezinyathelo eziningana. Zonke zisithatha isikhathi sokufuna ukwazi, ngakho-ke kungani ungazenzi ngezingxenye? Ukuze lokhu kuholele ku-dessert emnandi kakhulu, ifriji izosebenza. Kufanele ukwazi lokho iqhwa ikhekhe uzothola umphumela oswakeme ngokwengeziwe walena.
Okuthile okungavele kukuvimbe ekwenzeni isinyathelo sokumdakisa. Kumele futhi kuthiwe imvuthuluka yamakhekhe iyaqina. Olunye ucezu lolwazi olubalulekile ukuze sikwazi ukusebenza nabo ngokukhululeka okukhulu. Ngoba beka isithwathwa Awudingi ukulinda ikhekhe ukuthi lincibilikiswe ngokuphelele, ngakho-ke uzosheshe uqede futhi umphumela uzoba okhetheke kakhulu. Lapho usuqedile lesi sinyathelo, uzosishiya efrijini kuze kube isikhathi sokudla futhi kuphelele lapho.
Ungalibamba kanjani ikhekhe likhekhe
Esinye sezibiliboco ezinkulu esinazo kwizitolo zamakhemikhali yi ikhekhe likhekhe. Siyazi ukuthi kunezindlela zokupheka eziningana ezitholakalayo zaso futhi zonke zizosishiya isikhashana senjabulo emsulwa. Kokubili thina nezivakashi zethu. Yebo, uma ungenasikhathi sokwenza okusha kosuku, ungakhathazeki ngoba umngani wakho osefrijini uyohlale ekulungele ukukusiza.
Ngaphambi kokwethula kuwo, kufanele uqiniseke ukuthi kubanda ngokuphelele. Ukuze wenze lokhu, kufanele uqale uchithe imizuzu embalwa esiqandisini. Ungakwazi usike ikhekhe libe yizicucu ngazinye, ngoba kuzoba mnandi kakhulu ukugcina nalapho ukhonza. Ucezu ngalunye kufanele lusongwe ngokugoqwa kwepulasitiki. Zama ukungakhanyi kakhulu bese ukumboza ngezendlalelo eziningana. Uma uzothatha izinsuku ezimbalwa ukuyidla, khona-ke kwifilimu, sizokwengeza ucezu lwe-aluminium foil. Siyayidinga ukuthi ivikelwe kahle ukuze kuthi lapho ichithwe, siqhubeke nokujabulela ukuthungwa kwayo okunothile.
Friza iphayi le-apula
Ngaphandle kokungabaza, i I-Apple pie Ngenye yamaqebelengwane afriza kangcono kakhulu. Kungcono ngomqondo wokuthi lapho sifuna ukukusebenzisa, sizoba nakho ngaphezu kokuphelele. Okuthile okwenzeka nangamanye amaqebelengwane aqukethe izithelo. Vele azikho ezintekenteke njengalezo zikakhilimu noma ukhilimu, esikhulume ngazo. Vele, kufanele futhi uzame ukugoqa kahle futhi uwahlukanise nenyama noma inhlanzi esinayo efrijini.
Qhubeka uzenzele wena:
Uphaya we-apula owenziwe ekhaya
Ungafriza ikhekhe ezintathu zikashokoleti
Kungani kungenjalo?. Kungenza ngokuphelele. Ngale ndlela, siyaqhubeka nokuqhubekisela phambili umsebenzi. Vele, lolu hlobo lwekhekhe luvame ukwenziwa nge-curd ukuze kube nokuvumelana okukhulu. Yebo, engeza njalo okungaphezulu kwalokho abakucelayo ngalesi sithako. Ngale ndlela senza isiqiniseko sokuthi ngeke sibhidlike ngokushesha nje lapho siyikhipha esiqandisini. Manje sesingakujabulela kuphela ngoba ... Ngubani ongamelana ne- ushokoledi abathathu?.
Ngabe amaqebelengwane e-puff pastry angafriziwa?
Mhlawumbe inkinga ye-puff pastry ibucayi kakhulu. Uma ufuna iqhwa lamakhekhe, kungcono ukuthi ukwenze kodwa uma ziluhlaza. Ngaphambi kokuthi sikhulume ngamaqebelengwane aselungile kodwa kulokhu, kungcono ngaso sonke isikhathi ukuthi senze isikhathi sokupheka lapho sizowadla khona. Ngale ndlela, sizogcina zonke izakhiwo zenhlama. Vele, sizocacisa ukuthi nayo ingabanda uma seyiphekiwe kepha umphumela wayo ngeke ufane, ngoba lapho umunca umswakama, awusoze waqina.
Amakhekhe okupheka angabanda
Ukuze ube ne-dessert njalo futhi umangaze zonke izivakashi, ungahlala ukhetha i- ikhekhe leplamu. Lolu hlobo lwekhekhe olunezithelo noma ushokoledi, lungaphezu kokuyisisekelo lapho kuphekelwa isidlo esilula. Futhi, kufanele wazi ukuthi ingabanda futhi ihlala izinyanga ezintathu kulesi simo.
Amakhekhe kashokolethi. Sesivele sikubonile lokho uma ngabe Amakhekhe amathathu kashokoledi Kwethulwe njengokuthokozisayo ngaleso sikhathi futhi lapho sesikukhiphile, wonke amanye amakhekhe noma amakhekhe analesi sithako awasasele emuva kakhulu.
Amabhisikidi asongwe noma izingalo zamaGypsy. Zingabanda futhi zibe enye yama-dessert amnandi kakhulu. Vele, zama ukugwema labo abanokhilimu, yingakho sike saphawula phambilini. Kepha ... kuthiwani uma ufaka ushokoledi kubo?
Ungakwazi ukumisa iphayi eyenziwe?
Endlini yami bekulokhu kwenziwa kanjena futhi umphumela ube muhle. Ayemisiwe aba yizicucu futhi kulokhu kwakungeke kuncike kakhulu kuzithako ababenazo. Mhlawumbe kunalokho, kwaba inqubo okokuqandisa futhi kamuva, encibilikisa. Ukuze wenze lokhu, kufanele mayiphumule esiqandisini ize icibilikiswe ngokuphelele.
Friza ubhaka obhakiwe
Ukuze uthole ezinye ama-patties afriziwe futhi abhakwe zenziwe njengezisanda kwenziwa, kufanele sizifrize ngaphambi kokupheka ngokuphelele. Lokho wukuthi, lapho sekuphele uhhafu. Ngale ndlela, uma sesisusile efrijini futhi sizobenza, sizobanika elinye ithuba kuhhavini. Vele, ungalokothi ungene kwi-microwave ngoba ukuthungwa akufani.
Friza ikhekhe lepheki
Uma i-puff pastry iqandisiwe futhi uyincibilikisile ukwenza uphayi, kungcono ukuthi ungayibuyiseli efrijini. Yebo kunjalo ikhekhe elishaUngayiqinisa kodwa uhlale unakekela kahle ukuthi akukho mswakama ongena kuyo. Lapho-ke uyidla, uzoyisa kuhhavini futhi izokwenziwa njengoba isanda kwenziwa.
Friza ama-patties enziwe ekhaya
I-Las okuzenzela empanadas Zingezinye zezinqumo ezinhle kakhulu okufanele silunambithe lolu hlobo lobumnandi. Ungabamisa bobabili enhlama futhi uma sebeqedile. Ukuze ugcwaliswe, kungcono ukhethe u-anyanisi, upelepele noma utamatisi.
Ngabe i-tuna patty ingaqandeka?
Yebo ungamisa ifayili le- i-tuna pie, uma sekulungile. Ngendlela efanayo naleyo eyedlule, ungakwenza ngezingxenyana ezincane futhi lapho uya ukuyidla, uzobona ukuthi ayilahlekanga iota yokunambitheka kwayo okuhle. Ngoba kunokudla okuningi esingakugcina efrijini futhi okuzosisindisa emsebenzini onzima ngomzuzu wokugcina.
Uke waba nenkinga uma kuziwa ku- iqhwa patty?
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » I-Recetas del Mundo » Ukudla kwendabuko » Amathiphu wokuqandisa ophaya namaphayi
Amazwana ayi-46, shiya okwakho
Thola izindlela zokupheka ku-imeyili yami
kwenza iminyaka 13
Ngifuna ukwazi ukuthi ngingakwazi yini ukumisa iqhwa le-tuna eliphekiwe. Ngiyabonga
Uxolo, uma uphaya uneqanda, ingabe ungathoswa vele? Ngabe iqanda lilukhuni?
Ngingayiqinisa kanjani inhlama yokudla kwasolwandle noshizi empanadas ngaphandle kokuthosa?
Ngingashiya isikhathi esingakanani ngithosa uphayi we-tuna
URosa Ana Salas Dueñas kusho
kwenza iminyaka 12
SAWUBONA. NGIFUNA UKUXOXISANA NOKUTHI NGINGENZA KANJANI UKUTHI NGIPHAYE IPHAYINA NGE-COCKTAIL NGIYABASEBENZISA NGAPHANDLE KOKUTHOLA INKUNZI OKUMNYAMA NOMA UBUMNYAMA, NGIYAFUNA UKWAZI UKUTHI OCHWEPHESHE BAMAKHAYA BENZA KANJANI NJENGOBA NGIFUNA UKUYENZA IDAYISWE, NGIBONGE KAKHULU NGILINDILE IMPENDULO ESheshayo. ROSA ANA
Phendula uRosa Ana Salas Dueñas
UCristian Jose kusho
Nginenkinga, ngifisa ukwazi ukuthi ngenza kanjani ukuze inhlama ingabi mnyama uma iqandisiwe futhi uma izinga layo lokushisa linomthelela entweni ethile, ngabe kukhona ukushisa okulungile ukuyigcina? ngiyabonga ngazi okuningi ngalokhu
Phendula ujesu wamakrestu
katherine aburto kusho
kahle ngifuna ukwazi ukuthi ngingakwazi yini ukumisa amaphetheni kuhhavini
Futhi uma kamuva ukuwapheka ngingawafaka iqhwa noma i-espro ukuthi bayayincibilikisa kusukela ngaphambi kokuba ngibe neqhwa lapho ngiwafaka kuhhavini bangiphula
espro enhle, ngiphendule
Phendula katherine aburto
Ngifisa ukwazi ukuthi ngenza kanjani ukuze ngifrize ikhekhe lemifino noma yiluphi uhlobo lwekhekhe, uma liphekiwe, noma liluhlaza okokuqandisa.
Umbuzo wami uthi ungawamisa kangaki ama-empanada anosawoti noswidi uma equmbe amaqanda ekulungiseleleni. Ngiyabonga manje
Ngifuna ukwazi ukuthi ngingawathosa kanjani ama-empanadas enkukhu aphekiwe ngoba benginokudla okusele izolo ebusuku
kwenza iminyaka 11
Sawubona, bengifuna ukwazi ukuthi ungakwazi yini ukuthosa ama-beet abilisiwe
Sawubona, ngifisa ukwazi ukuthi ungafaka iqanda elibiliswe kanzima kuzo zonke izinhlobo zamakhekhe bese uyathosa
U-Ana Maria kusho
Ngidinga ukwazi ukuthi ngingawapheka kanjani ama-empanadas kahle engiwabamba engaphekiwe, ngoba kufanele ngenze ambalwa kakhulu engifuna ukuwenza ngosuku olulodwa futhi, ngokwesibonelo, ngiwapheke ngokulandelayo, okufanele kukhishwe kufakwe kuhhavini, linda?
UTatiana Cortes kusho
kwenza Izinyanga ze-10
Ngingaziqandisa kanjani izinkukhu zezinkukhu nenyama futhi uma zithosa aziqhekeki
Phendula kuma-Tatiana cortes
Ngingakwazi ukuthosa i-matambre ebilisiwe eneqanda? Uma kunjalo, ingahlala isikhathi esingakanani i-frizzy? Ngiyabonga
UDora Cristina Farias kusho
Ngifuna ukwazi ukuthi ngingawaqandisa kanjani ama-patties aluhlaza futhi uma kufanele ngiwapheke ngqo kusuka kuhhavini, ngiyabonga
Phendula uDora Cristina Farias
Ngifuna ukwazi ukuthi inhlama yama-empanadas iyancibilika yini noma ayimboziwe
daniel amato kusho
Ngingathanda ukwazi ukuthi ungayiqandisa yini i-empanada eseyenziwe ngomumo ngenhlama eluhlaza okwesikhathi esingakanani futhi uma ukugcwaliswa, lapho kuneqanda, kungonakala, futhi ukuze inhlama emnyama ingahlali. Kubalulekile ukwazi ukuthi njengoba kufanele ngiqhube ibhizinisi lokudla okusheshayo. Ngiyabonga
Phendula udaniel amato
sawubona, ngingathanda ungitshele ukuthi ngingawaqandisa kanjani ama-tarts emifino. Ngiyabonga
Ngidinga ukwazi ukuthi ngingayishiya kanjani inhlama yama-empanadas kusuka osukwini olulodwa kuye kolandelayo nokuthi angabi mnyama futhi kube nzima kangako
Ngidinga ukwazi ukuthi ngingawaqandisa kanjani ama-patties eshizi afana nalawo athengiswa ezitolo ezinkulu, ngiwadinga ukudayiswa
Ngingathanda ukwazi ukuthi ama-patties asephekiwe enyama asethosiwe yini.
ngiyabonga kakhulu natalia
u-alicia mncane. izinduku ... uruguay kusho
* Ngingawaqandisa amaqebelengwane e-chard ??
* amaqanda ngaphakathi mahle?
* kanye ne-zucchini yesiqu?
Nginebhizinisi lasehlobo futhi ngithanda ukuzihlela ngine-stok ... ngiyabonga kakhulu
Phendula u-Alice Slim. izinduku ... uruguay
Ngizojabula uma ungazisa ukuthi kufanele ngenze njalo ukuze ama-empanada ngemuva kokumiswa, lapho uwafaka kuhhavini inhlama iphuka.
nokuthi kungani ama-patties amnandi enyama amakwa yinhlama lapho iqandisiwe.
Nginomcimbi okufanele ngenze ngawo ama-empanadas angama-2000, ngifisa ukwazi ukuthi ngiwahlwanyela kanjani ukuze inhlama ingaphuli noma ngiligcine kuziphi izinga lokushisa ukuze lihlale amasonto amathathu ngaphandle kokuphula noma ukulahlekelwa ukunambitheka .
Ngiyabonga kakhulu ngibheke phambili iziphakamiso zakho.
Ngingathanda ukwazi ukuthi kungani ungeke ukwazi ukumisa izingcezu zenyama nge-hard vhuevo. Ngiyabonga.
ngoba iqanda elinzima elibilisiwe likhazimula futhi liba nzima kakhulu futhi libe yirabha futhi likhulu
Sanibonani, sinebhizinisi le-Salteño empanadas nomyeni wami, futhi besimosha izinto eziningi ezithengiswayo ... sathenga ifriji futhi sengivele ngiwaqandile ama-empanada aluhlaza futhi ansundu kakhulu futhi asephekwe kuqala ayoma ... uzodinga ukwazi ukuthi ziphekwa ngasiphi isikhathi uma ziluhlaza? noma uma kungcono kuphekwe kusengaphambili nokuthi ungayigcina kanjani ijusi? Yisiphi isikhathi esilula ukusikhipha Unamandla noma uthambile? kanti ezinye ziyaqhekeka. Kusukela vele ngiyabonga kakhulu….
Umama ufuna ukugcina i-tuna tart neqanda, esivele iphekwe efrijini, ingaba yinde kangakanani?
Ngincoma ukuthi uyisebenzise ngaphambi kwezinyanga ezintathu ezizayo
Sawubona mirta, ngifisa ukwazi ukuthi ngabe othile ukuphendulile noma ngabe uxazulule inkinga ye-empanadas ngoba nginenkinga efanayo, uma ungangisiza ngizoyithokozela
AMASILO ITURRALDE kusho
ANGINAWO WOKUGCINISA, NGINESIQandisi ESINESIKHANGISI, NGIFUNA UKWAZI UKUTHI NGINGAYIGCINA ISIKHATHI ESINGAKANANI INYAMA EQHELEKILE EMPANADAS (EPHAKWE) KUSIJALO ENGIKUKHULUMILE NGAYO.
Phendula ku-MARINES ITURRALDE
Sawubona, ngifuna ukuqala ibhizinisi lamakhekhe emifino, i-ham noshizi, ummbila ofriziwe, ungangitshela ukuthi kufanele ngiyiqande kanjani inhlama eluhlaza engaphekiwe emhlophe nokuthi kufanele ngiyikhiphe kanjani ukuze inhlama ingabi manzi, ngilindele impendulo yakho, ngiyabonga
Sawubona, umxhumanisi.Amadiski okwenza ikhekhe le-rogel angabanda njengoba nami ngenza. Ngiyabonga ukwanga
maria maza kusho
Ungafaki noma yini eneqanda elibiliswe kanzima, ifana nenjoloba futhi imbi kakhulu kulwanga, pheka phezu kokushisa okuphansi uma kusehhavini ukunikeza isikhathi sokugcwalisa ukuncibilika, kwenzeke kimi ukuthi inhlama iphekiwe kanti ngaphakathi iqandisiwe, ayidli, uma kuwuhhavini kagesi ungcono kakhulu ngoba kuthatha isikhathi eside ukupheka, okuthosiwe, iqiniso likhona bengingeke ngazi ukuthi ngibasize kanjani, bangange nezibusiso eziningi.
Phendula u-maria maza
Sawubona! Ngidinga ukwazi ukuthi ngingaqandisa kanjani amachwane enkukhu noshizi ngenhlama eluhlaza…. nokuthi angimanzi. Ngifisa nokwazi ukuthi ngingawabhaka kanjani ukuze angahlephuli noma aphume esomile. Futhi ngicela uma ngikwazi ukuqandisa imvubelo inhlama. Ngibonga kakhulu!!
Sawubona! Ngiyakutshela ukuthi ngine-empanadas tapas efriziwe. Ngingakwazi ukuhlehla, ngigcwalise futhi ngiphinde ngisebenzise kabusha ' Ngiyabonga
UCarlos andres kusho
Ngisenkingeni, anginawo umsebenzi kwafika kimina ukuthi ngithengise ama-empanada aseHawaii (ushizi, ham ... uphayinaphu ...) owenziwa ngumama wami (Zimnandi).
Yini eyengeziwe kubo ukuze zigcinwe? Ngoba umqondo ukuwathengisa efriziwe, ephekiwe, ezitolo nasezitolo ezinkulu.
Phendula uCarlos Andrés
Cristhian camilo neira kusho
Sawubona kusihlwa ngikubhalela ngivela eColombia, nginombuzo, ngingawenza kanjani ama-empanada enkukhu nenyama enziwe nge-promasa, kufanele ngiwagcine kanjani ukuze angaqhekezi; Ngibonga kakhulu
Phendula ku-Cristhian camilo neira
BETTY BAEZ kusho
Sawubona, NGIFUNA UKWAZI UKUTHI NGANI NGENZA I-EMPANADAS KUSUKELA OLUNYE KUYA KWELINYE BAYE BANAMANZI, ANGIKWAZI UKUBABAMBA UKUBABEKA KUMBONGO OVULILE.
Phendula ku-BETTY BAEZ
Ngingawafaka kanjani esiqandisini amalanga kakolweni wosuku olulodwa kungeniswe enye imace ngaphandle kokuba manzi kakhulu.
Ukufuna imoto esetshenzisiwe noma entsha kungaba yindlela eyinselele uma ungazi ukuthi wenzani. Ngokuzifundisa ngokuthenga ezitolo zezimoto ngaphambi kokuvakashela indawo oyidayisayo, ungenza izinkinga zibe nzima kakhulu kuwe. Amathiphu alandelayo angasiza ukulandela kwakho ukuthenga iholide kube mnandi kakhudlwana.
Imvamisa thumela uchwepheshe wezimoto eceleni lapho uthenga imoto entsha. Abathengisi bezimoto badumile ngokuthengisa ulamula futhi ungahle ungafuni ukuba yisiguli sabo esizayo. Noma nini lapho ungeke uzitholele uchwepheshe wokucabangela ama-autos kanye nawe, okungenani qiniseka ukuthi unaye ukuthi abuyekeze ukukhetha kwakho kokugcina ngaphambi kokukuthenga.
Yazi imikhawulo yakho. Ngaphambi kokuba uqale ukuyothenga imoto noma imoto yakho ezayo, khetha ukuthi ungakhokhela malini ukuphuma, bese uhlala nayo. Ungakunaki ukufaka inzalo ekulinganisweni kwakho. Ngokuqinisekile uzokhokha cishe u-20% njengenkokhelo kusengaphambili futhi, ngakho-ke lungela.
Ngaphambi kokuvakashela indawo edayisa impahla, yazi ukuthi ungathanda uhlobo luni lwemoto. Funda konke okungenzeka ngaphambi kokuthenga ukuze uthole ukuthi yini esebenza kahle ngesabelomali sakho sezezimali nezidingo zomndeni. Yenza umsebenzi wakho wesikole ukuthola ukuthi kufanele ukhokhe malini ukuthola imoto engaba khona.
Ngaphambi kokusayina noma yisiphi isivumelwano yenza isikhathi sokudlula kuwo wonke amabanga, njengokuphrinta okuhle. Uma ucishe noma yini ekhonjisiwe ongayiqondi nje, ungakhombisi uze uthole isixazululo ovele usiqonde. Abathengisi abangenasimilo bayakwazi ukusebenzisa inkontileka ukufaka amacala amaningi okungakhulunywa ngawo.
Uma kwenzeka ugcina iseluleko esandulele engqondweni yakho ngesikhathi esizayo lapho uthenga imoto, ungahle uthole ithuba elihle. Ukuthenga imoto kunciphisa ikhanda. Mane nje usebenzise amathiphu alo mbiko futhi uzoba nemoto ongathanda ukuyikhokha ngezindleko ezinhle.
Kade ngenza ama-patties enyama okokuqandisa iminyaka (inhlama eluhlaza kanye ne-elleno esanda kuphekwa) futhi aqukethe iqanda elibilisiwe, kepha i-sooo eqoshiwe, icishe yahlehliswa ngemfoloko. nokunambitheka kwawo akuguquki. Lapho ngizikhipha, ngazifaka ngaphandle kokuhlehlela ngqo kuhhavini oshisayo.
federico portela kusho
Ulikhipha kanjani ikhekhe elibhakwe kuhhavini? Ngikhiphe eyodwa efrijini ngayifaka kuhhavini ukuyinikeza iklayenti futhi kwathatha cishe i-20 min. okungenani ekuncibilikiseni. Ngicabange ukuthi ihlehlise ngokushesha. Kungenzeka yini noma kukhona engikwenzile okungalungile? Ingabe ikhona indlela yokwenza ngokushesha?
Phendula ku-federico portela
LULU AGUILLON kusho
SEKUYACACA KIMI UKUTHI UMA UNGAKHONA UKUDLULA OKUDLAYO, KODWA NGIFISA UKWAZI UKUTHI IPHEPHA LOKUPHAFU ELINGAKHAKI LIHLALA KUNGAKANANI LIHLAZIWA, LINGABHAKIWE NOMA SELIVUKILE NGOKUPHAKATHI.
Phendula uLULU AGUILLON
Amaqanda aqhephukile notamatisi kanye nokwatapheya
Ukupheka ku-imeyili yakho
Zonke izindlela ku-imeyili yakho